Ngaba ungahlala kunye ne-50 euro smartphone? Amava ethu | Iindaba zeGajethi
Kwi-Actualidad Gadget ungalandela ngokusondeleyo ukwaziswa okutsha kweetekhnoloji, nangona kunjalo, sihlala sineliso elihle kumhlaba wentando yesininzi. Ngale nto sithetha lonto ayingabo bonke abasebenzisi abazimiseleyo (okanye abafuna) ukuchitha amakhulu eeuros kwiifowuni eziphathwayo. Kungenxa yoko le nto kuvela into lowcost ngomnxeba otshintsha indlela esizibona ngayo ezi zinto.
Kucacile ukuba iintlobo ezithile zee-smartphones ziye zaba yinto yeminqweno, iimveliso ezinkulu zilwela into eyaziwa ngokuba yi "the flagship", eyona fowuni ilungileyo yenkampani nganye, ubuncinci ngokomgangatho, kodwa ... uthini malunga ixabiso? KwiActualidad Gadget sifuna ukuhlalutya ukuba bunjani ubomi bemihla ngemihla ngento eyaziwayo njenge-smartphone enexabiso eliphantsi kwaye uyazi ukuba ungaphila na ngesandla.
Kuyacaca ukuba ngumnxeba ixabiso eliphantsi ishiya imiba ethile yeefowuni ezixabisa amakhulu eedola kwaye zinokuqwalaselwa njengezongezo ngaphandle kwezinto ezininzi. Nangona kunjalo, eyona nto sifuna ukuyilungisa namhlanje kwiActualidad Gadget kukuba i-smartphone enexabiso eliphantsi inokuthi ihambe njani ekubeni sisixhobo esigubungela iimfuno ezisisiseko, ukuze sibe liphupha elibi ... okanye hayi. Kungenxa yokuba silindele ukuba isigqibo sethu malunga nendlela esebenza ngayo le fowuni ixabiso eliphantsi Bekunyamezeleka kakhulu kunokuba besingacinga. Ke siza kukhenketha amava ethu enyanga sisebenzisa umnxeba oxabisa ngaphantsi kwama-euro angamashumi amahlanu.
1 Siphume kwi-iPhone saya kwifowuni ebiza imali engaphantsi kwe-50 euro
2 I-Doogee X5 Pro 4G, uphononongo lwefowuni enexabiso eliphantsi
3 Ukuqhagamshelana kokuqala nesixhobo esinexabiso eliphantsi, uhambe kakuhle kwi-iPhone
4 Izigqibo zam emva kweeveki ezimbini zokusebenzisa
5 Iinkonzo kunye neengxaki zokusebenzisa ifowuni ephantsi
5.1 Iingenelo zokusebenzisa ifowuni enexabiso eliphantsi
5.2 Bendlela yokusebenzisa ifowuni enexabiso eliphantsi
Siphume kwi-iPhone saya kwifowuni ebiza imali engaphantsi kwe-50 euro
Into ebesinayo kwaye esinayo ngoku, sisitshixo sokuqonda. Asizukuphumelela kuphela ekusebenziseni ifowuni ephezulu ye-Android efana ne-Samsung Galaxy S8 okanye i-LG G6, ngeli xesha sifuna ukwandisa ubunzima, kwaye Simkile kwi-iPhone 6s, esebenza ngayo inkqubo ye-iOS, ukuya kwifowuni ebiza imali engaphantsi kwe- $ 50. Nokuba sisixhobo ukusukela esiphelweni sonyaka ka-2015, ii-iPhone 6s zisese-elite yefowuni ephathekayo ngokweempawu, sinomprosesa kunye ne-GPU yezona zinamandla kwintengiso, amandla e-3D Touch, umfundi weminwe, iphaneli ephezulu esemgangathweni (i-LCD), inkqubo yokusebenza elungiselelwe kunye nekhamera elungileyo kakhulu.
Ngoku Siza kusebenzisa i-Doogee X5 Pro, ifowuni "yamaTshayina" apho unokuzifumana khona, kude kakhulu ngokokusebenza kunye nomgangatho wezinto zokusebenza kunokuba besikade siqhelekile. Ekugqibeleni, olu vavanyo lunokuba yindlela elungileyo yokuqonda i-telephony yanamhlanje, okanye uphume usilele ngokupheleleyo.
I-Doogee X5 Pro 4G, uphononongo lwefowuni enexabiso eliphantsi
Sifumana ntoni ngale Doogee X5 Pro 4G? Ewe, sisixhobo esinexabiso eliphantsi ongenakukwazi nokucinga. Ndifumene isaziso ngento enokuba sisivumelwano, i-smartphone ebiza imali engaphantsi kwe-50 euros, ngokuthe ngqo ngokuchanekileyo kwe- € 42. Esi sixhobo sijongeka kakhulu njenge-BQ Aquaris E5 kuyilo. Masiqale ngoyilo, ubungqindilili kunye nobuncinci, sinesikhuseli seplastikhi, igobolondo elijikelezileyo elenziwe ngePVC uqobo, kunye nepaneli yangaphambili ethe tyaba (akukho miqolo ye-2.5D). Uyilo, Njengoko besitshilo, umncinci ukuya kwelona liphezulu, egcina umba apho ifowuni ixabiso eliphantsi akufuneki ibonakale. Ngendikhethe uhlobo olumnyama, kodwa ngeli xesha kukhethwe umphambili omhlophe nomnyama ngaphambili. Ngaphambili sifumana amaqhosha amathathu angakhanyiswanga angasemva, kunye nekhamera yangaphambili, kwicala lasekunene laMandla kunye neqhosha levolumu, ngelixa ngasemva yeyekhamera kunye nefleshi. Okokugqibela, kwicandelo eliphezulu sine-microUSB kunye ne-3,5mm Jack, kunye nesithethi esikwindawo esezantsi.
Ngokubhekisele kwiimpawu, siqala ngepaneli yayo ye-IPS I-intshi ezi-5 ngesisombululo se-HD (720p)Inyaniso kukuba yenye yezona zinto zimangalisa kakhulu, iyazikhusela kakuhle, ithathela ingqalelo ixabiso lesixhobo. Mhlawumbi iswele ukukhanya. Okwangoku, ngaphakathi sifumana iprosesa esezantsi kakhulu, iprosesa Mediatek MTK6735 ngu imelwe ukuba ngama-64 eebitshi, ekhatshwa ngu I-2GB ye-RAM ukuba kumgaqo kuya kwanela ukuphatha inani elikhulu lezicelo (eyona nto imangalisayo kwesi sixhobo). Siya kuba nayo 16GB yokugcina yangaphakathi enokwandiswa ngekhadi layo le-MicroSD.
Ngokuphathelele kwiikhamera, sibuyele ngo-2006, sidibene no 5MP kwikhamera yangemuva kunye ne-2MP ngaphambili, iziphumo zizinto umntu anokuzilindela, zihlwempuzeke kakhulu ... Malunga nokunxibelelana, asiyi kuba nanto ingaphantsi Idatha yeselfowuni ye-4G LTE, Ikhatshwa yiWiFi enoluhlu oluzikhusela kakuhle nakwiBluetooth. Ngokucacileyo, phantse zonke iifowuni zaseTshayina, sinendawo ephindwe kabini yamakhadi e-SIM kunye nendawo yokwandisa ukugcinwa kunye nenye I-MicroSD, engayi kuba nakho ukugqitha kwi-32GB iyonke.
Ifoto ethathwe ngekhamera yeDooGee X5 Pro
Malunga nenkqubo yokusebenza, inguqulelo yam ndiyifumene nayo ncinane kune-Android 6.0 Marshmallow, elinye inqaku elithandekayo. Ngelixa kuyinyani ukuba umaleko weDoogee unomdla kakhulu, into esiza kuthetha ngayo kamva. UKUYA kalukhuni Yiyo yonke into endinokukuxelela yona malunga neempawu zobuchwephesha ze I-Doogee X5 Pro 4G. Ngoku into ebalulekileyo, ndathenga esi sixhobo kwiAmazon kwivenkile eyaziwayo, itywinwe kwaye intsha, ngee- € 49,99 kuphela, nangona basebenzise isaphulelo senye i- € 7,99.
Ukuqhagamshelana kokuqala nesixhobo esinexabiso eliphantsi, uhambe kakuhle kwi-iPhone
Into yokuqala ukuyivula, kunye nokwenzakala kokuqala. Isixhobo siza kugcwalisa usetyenziso lwemvelaphi ethandabuzekayo kunye nokusetyenziswa okungathandekiyo ngakumbi. Nangona kunjalo, njenge umbumbi ukuba ndim, bendisazi ukuba ndinesisombululo esilula. Kwakulixesha lokuba ndiqalise Windows 10 PC kunye nokwenza Ingcambu kwisixhobo. Nje ukuba Ingcambu Ndikwazile ukufaka isicelo sokucoca kwaye ndaqhubeka nengcambu ukukhipha zonke ezo zingakhange zenze ukuzithemba. Malunga neyure kamva, umnxeba wawulungele ukusetyenziswa ndim, ucocekile. Ngoku siya kwiVenkile yeGoogle Play, inyathelo lesibini elikhulu. Ivenkile yeGoogle kunye ne-iOS enye ayinanto yakwenza nayo, nangona kunjalo ndinamava nayo, ke ke ndiye ndakhuphela usetyenziso olufanayo endandinalo kwifowuni yam ephambili.
Sikulungele, ikhibhodi entsha, isiqalisi esitsha, usetyenziso olutsha ... Kungaphelanga neeyure ezimbini kamva ndandisele ndinayo yonke into eyimfuneko kwisixhobo ukuze ndikwazi ukuphuma nayo.
Saqala ukulawula i-imeyile nge newton, ukunxibelelana neqela lokubhala ngoku yocingo, ukwenza umnxeba rhoqo ... ibiyimini yam yemihla ngemihla ukusukela oko ndayifumana, emva kweeveki ezimbalwa ndingatsho ukuba ungaphila ngesixhobo ixabiso eliphantsi, kodwa ngexabiso elingakanani. Kuyinyani ukuba ndilahlekelwe yikhamera, umzekelo, andikwazi ukuya kwiminyhadala kuphela ngeDoogee X5 Pro 4G, ngekhe uthande ukubona iifoto zoqwalaselo zithathiwe ngekhamera. Nangona kunjalo, ngokubanzi imisebenzi yam yemihla ngemihla njengokulawulwa kwe-imeyile, ukukhangela kwiwebhu, ukulungelelanisa iqela leGadgetidadad yeGadget, yonke into inokwenzeka. Ndikushiya umzekelo wezicelo endizifakileyo:
Ngempumelelo, eEsi sixhobo asizokwazi ukwenza okona kulungileyo ngokwegrafiki, eneneni andikukhuthazi konke konke ukudlala umdlalo, okanye nawuphi na umsebenzi olungileyo wokulungisa njengokufota, ulibale, oku kuyinyani ixabiso eliphantsi.
Izigqibo zam emva kweeveki ezimbini zokusebenzisa
Isiphelo sam Kuyakhanyisa malunga noku, ngokuqinisekileyo umsebenzisi ophakathi unokusebenzisa olu hlobo lweefowuni eziphathwayo ixabiso eliphantsi. Ngapha koko, ndingaya kude ndiyokutsho ukuba yeyona fowuni ifanelekileyo yabathandi beetekhnoloji, abantu abadala, abancinci kakhulu ... andinangxaki zokugubungela, Nangona kufuneka ndikhankanye iingxaki ezithile zebhetri kwiintsuku zokuqala zokusetyenziswa, kubonakala ukuba zazingalinganiswanga ngokuchanekileyoa, into etshintshileyo kwiintlawulo zokuqala ezimbini okanye ezintathu ezipheleleyo, isixhobo sihlala usuku olupheleleyo ngaphandle kokusebenzisa okuqhubekayo.
Nangona kunjalo, kufuneka ndiyivume loo nto Ndigqibile Ingcambu kunye nokucocwa kwezixhobo ngaphambi kokusetyenziswa kwazo ngaphandle kokusebenza kwento enye ngekhe ibe yile nto bendiyixelele kule migca, kwaye abasebenzisi abaqhelekileyo be-Android ngokunyanisekileyo abaqondi. Kungenxa yoko le nto kuya kuba nzima kwaba basebenzisi bangaphambili ukulawula isixhobo, ngaphandle kokuba banoncedo lomntu owaziyo umxholo weeROM. Andizukucebisa konke konke ukushiya usetyenziso lwenyani lwe-SPAM olubandakanywe ngumnxeba, lixabiso lokuhlawula xa ufumana i- isixhobo esinezi mpawu nge- € 42 kuphela.
Ngokuqinisekileyo, Umsebenzi wam kunye nemeko yobungcali indimema ukuba ndenze imali ngakumbi kwifowuni ephathekayo, kwaye ndikhawuleze ndabuyela kwi-iPhone 6s yamNangona kunjalo, ngoku iDoogee X5 Pro ikwayinxalenye yoluhlu unobuchuleMasithi yifowuni endisebenza nayo, ifowuni edabini. Ewe ungaphila kwaye uphile ubomi obuqhelekileyo nge-smartphone engaphantsi kwama-50 euros.
Iinkonzo kunye neengxaki zokusebenzisa ifowuni ephantsi
Iingenelo zokusebenzisa ifowuni enexabiso eliphantsi
Umnxeba awuyi kuba yinkxalabo yezoqoqosho, ndiziva ndikhuselekile ukuyisebenzisa kuyo nayiphi na imeko, iyonke, indibize nge- € 42.
Uyeka ukunika ukubaluleka kwenkqubo yefowuni ephathekayo.
Uyamangaliswa ukuba kutshiphu ukwenza ntoni.
Ewe iyangqinelana nezona zicelo ziphambili zokusetyenziswa kwemihla ngemihla: WhatsApp, Facebook, Gmail ... njl.
Singatyala imali esiyigcinayo kwezinye iintlobo zeemveliso zetekhnoloji.
Bendlela yokusebenzisa ifowuni enexabiso eliphantsi
Ngokuqinisekileyo ayikho ikhamera.
Ulahlekelwa zizibonelelo ezincedisayo (ungaphila ngaphandle).
I-SAT yezi ntlobo zeemveliso zihlala ekuphakameni kwexabiso.
Ukuzonwabisa ngokuqinisekileyo akulungelanga phakathi kwezinto ezinokwenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ngaba ungahlala kunye ne-50 euro smartphone? La ngamava ethu
Ndinayo loo fowuni, ukongeza kwi-iphone kwaye kufuneka nditsho ukuba kukho nescreen sokuchukumisa. Ulibale ukubhala ngokutyibilikayo kwifowuni ye- € 50. Kunzima ukukuqhela, kodwa kuyenzeka. Inqaku elinomdla. Imibuliso !!
Buah, isizathu esipheleleyo, ukubhala ngokukhawuleza okukhawulezileyo akunakwenzeka. Ndiyabulisa kuKatobest.